Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်)
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နှလုံးကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အချို့သော အသည်းရောဂါတွေခံစားရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖောရောင်မှုကို သက်သာစေဖို့အတွက် Apo-Amilzide ကို အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။Apo-Amilzide ကို သွေးပေါင်ချဖို့အတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Apo-Amilzide ကို သောက်သုံးဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Apo-Amilzide ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးဗူးနဲ့အတူပါလာတဲ့ ဆေးညွှန်းစာရွက်မှာ ရေးထားတာတွေ အားလုံးကို အတိအကျ လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မသေချာတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Apo-Amilzide ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Apo-Amilzide ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Apo-Amilzide ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Apo-Amilzide ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Apo-Amilzide ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Apo-Amilzide ကို မသုံးစွဲခင် အောက်ပါအချက်အလက်တွေရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပြပါ။
amiloride, hydrochlorothiazide, sulfonamide တို့ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေ၊အခြားဆေးတွေ ဒါမှမဟုတ် amiloride နဲ့ hydrochlorothiazide ဆေးပြားတွေရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်။
(သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှုတွေ အပါအဝင်) ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရတော့မယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ amiloride နဲ့ hydrochlorothiazide ဆေးတွေ သုံးစွဲနေရကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်ပြောပါ။
သင့်အနေနဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။
amiloride နဲ့ hydrochlorothiazide တို့ဟာ မူးဝေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လှဲနေရာကနေ ရုတ်တရက်ထလိုက်ရင်လည်း မိုက်ခနဲဖြစ်သွားတာ၊မေ့လဲသွားတာမျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာမျိုးဟာ သင့်အနေနဲ့ ဒီဆေးကို စတင်သုံးစွဲခါစမှာ ပိုမိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လှဲနေရာက ထတဲ့အခါ ချက်ချင်းမတ်တပ်မရပ်လိုက်ဘဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းထပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ မိနစ်အနည်းငယ် ထိုင်နေမယ်ဆိုရင် အဆိုပါပြဿနာကို ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အရက်ဟာ amiloride နဲ့ hydrochlorothiazide တို့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုလာစေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ဆားလျှော့စားသင့်တယ် ၊ဆိုဒီယမ်ဓါတ်ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကို လျှော့စားသင့်တယ် ဒါမှမဟုတ် ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေ (ဥပမာ ငှက်ပျောသီး၊ဆီးသီးခြောက်၊စပျစ်ခြောက်၊လိမ္မော်ရည်
စသဖြင့်)ကို ပိုစားသင့်တယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားခဲ့ရင် သင့်အနေနဲ့ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အတိအကျ လိုက်နာရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Apo-Amilzide က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
ဒီဆေးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် ပျောက်မသွားဖူးဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း နှင့် electrolyte ဓါတ်များ မညီမမျှဖြစ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရခြင်း။
အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊ (အစာ၊ရေစသည်တို့) မြိုချရခက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Apo-Amilzide ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
 Digitalis glycosides
 Loop diuretics (e.g., furosemide)
 Sulfonylureas (e.g., chlorpropamide)
 Spironolactone (Aldactone, in Aldactazide), triamterene ပါဝင်သော ဆေးများ, potassium ဖြည့်စွက်အားဆေးများ သို့မဟုတ် potassium ပါဝင်သော ဆေးများ။
 Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors —> benazepril (Lotensin, in Lotrel), captopril (Capoten), fosinopril, lisinopril (Prinzide, Zestoretic), moexipril (Univasc, Uniretic), perindopril (Aceon), quinapril
(Accupril, in Accuretic), ramipril (Altace), and trandolapril (Mavik, in Tarka)
 Angiotensin II receptor antagonists (ARB) —-> azilsartan (Edarbi, Edarbyclor), candesartan (Atacand, in Atacand HCT), eprosartan (Teveten, in Teveten HCT), irbesartan (Avapro, in Avalide), losartan (Cozaar, in Hyzaar),olmesartan (Benicar, in Azor, Benicar HCT), telmisartan (Micardis, in Micardis HCT), and valsartan (Diovan, in Diovan HCT, Exforge)
 Barbiturates —-> phenobarbital and secobarbital (Seconal)
 Corticosteroids —-> betamethasone (Celestone), budesonide (Entocort),cortisone (Cortone), dexamethasone (Decadron, others), fludrocortisone (Floriner), hydrocortisone (Cortef, Hydrocortone), methylprednisolone (Medrol), prednisolone (Prelone, others), prednisone (Rayos), and triamcinolone (Aristocort, Azmacort); corticotropin (ACTH H.P., Acthar Gel)
 Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune)
 Digoxin (Lanoxin)
 Insulin နှင့် အခြားသော ဆီးချိုသောက်ဆေးများ။
 Lithium (Lithobid);
 စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ —-> ibuprofen (Advil, Motrin, others), indomethacin (Indocin), and naproxen (Aleve, Naprosyn, others)
 Tacrolimus (Astagraf XL, Prograf)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Apo-Amilzide က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Apo-Amilzide ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကတော့
အသည်းရောဂါ စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကတော့ နေ့စဉ်ဆေးပြား တပြား သို့မဟုတ် နှစ်ပြားကို ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ သောက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Apo Amilzide (အပို-အမီလဇိုဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Apo-Amilzide ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား ၅၅ မီလီဂရမ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။ ဆေးပမာဏလွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
Electrolyte ဓါတ်များ မညီမမျှဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ် များပြားခြင်း)။
Electrolyte ဓါတ်များ ကုန်ခမ်းခြင်း (ဥပမာ သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်၊ကလိုရင်းဓါတ်၊ဆိုဒီယမ်ဓါတ်များ နည်းပါးခြင်း)။
Apo-Amilzide ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
hydrochlorothiazide.html. Accessed November 13, 2016
Accessed November 13, 2016